Zvichakuwanai imi munoti zvakaipa zvakanaka, zvakanaka muchizviti zvakaipa munosandura rima muchiriita chiedza chiedza muchiita rima muchiisawo zvinovava panzvimbo pezvinotapira zvinotapira muchiisa panzvimbo pezvinovava.
Rema romunhu rinotaura zvenhema pfungwa dzaro dziri pakuronga kuita zvakaipa napakuita zvisingadiwe naMwari richitaura zvisiri izvo pamusoro paTenzi. Ane nzara anomuregera nenzara yavo vane nyota nenyota yake.
Nokuti munhu wose anoita zvakaipa anovenga chiedza uye haauye kuchiedza kuitira kuti mabasa ake arege kuburitswa pachena.
Asi painge mutongi iyeyo afa, vaipinduka votoita zvinhu zvakaipa kwazvo kupinda zvamadzibaba avo, votevera vamwe vamwari vachivanamata vachivapfugamira. Vaizongoramba vangoti dzvemere namabasa avo iwayo vasisasiyane nomusikanzwa wavo.
Zvandakaona zvangu ndezvokuti vanorima huipi nokudyara nhamo vachakohwawo zvimwechetezvo,
usazviite munhu anoziva itya Tenzi ufuratire uipi.
Ndinodaro nokuti havakwanisi kuvata kana vasina kuita zvakaipa, havawane hope, kusvikira vatovhiringidza mumwe munhu,
Kutya Tenzi kunoreva kuvenga uipi, ndinovenga kuzvikudza nokuzvitutumadza nokutaura kusina kururama.
Tenzi inhare kumunhu wemaitiro akarurama asi anoparadza vaiti vezvakaipa.
Mumwoyo yavane bangano rakaipa, mune unyengedzi asi mune vanoronga zvakanaka mune rufaro.
Wakaipa anofunga zvakaipa agoti shutu kuzara nomusikanzwa ozoburitsa nhema.
Musandibatanidzire pamwechete navakaipa navanhu vanoita zvakaipa vanotaura zvakanaka navamwe vavo asi mumwoyo muine zvakaipa.
nokuti vakaipa vachaparadzwa asi vanotarisira naTENZI vachava ndivo varidzi venyika.
Unotopa muromo wako manyemwe okutaura zvakaipa. Rurimi rwako runoronga unyengedzi
Maziso avo akatozvimba nokukora, mwoyo yavo inotutumira noupenzi.
Regai kurerekesa mwoyo wangu kune chinhu chakaipa kuti ndiite zvinhu zvakaipa, pamwechete navanhu vanoita zvakaipa regai kuti ndidye twunonaka twavo.
Naizvozvo chitadzo ngachirege kukutongai mumiviri yenyu inofa chichiita kuti muteerere havi dzawo.
Usakundwe nezvakaipa asi kunda zvakaipa nokuita zvakanaka.
 Nokuti imomo mumwoyo yavanhu, ndimo munobva pfungwa dzakaipa, nounzenza, nokuba, nokuuraya, noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi.
 Imi vana venyoka, mungataure sei zvakanaka imi makaipa, nokuti muromo unotaura zvinenge zvichitofashukira mumwoyo. Munhu wakanaka anoburitsa zvinhu zvakanaka zvichibva muupfumi hwake hwakanaka. Munhu wakaipa anoburitsawo mudura rake rouipi.
 Ngaparege kuva nomunhu anoti kana aedzwa oti, “Mwari akandipinza muchiedzo” nokuti Mwari haagoni kuedzwa nouipi. Iyewo pachake haapinze munhu muchiedzo. Asi munhu wose anoedzwa kana achitorwa mwoyo nokufurirwa noruchiva rwake.
 Rurimi moto. Rurumi inyikawo pachayo nokwayo youipi mukati menhengo dzomuviri wedu. Runosvibisa munhu wose sezvaari ruchingandutsa nomoto nzira youpenyu hwose hwomunhu. Irwowo runobatidzwa nomoto warwo negehena. Mhuka dzamarudzi ose neshiri nezvose zvinozvova napasi nezvinhu zvomugungwa zvinogona kupingudzwa uye zvinopingudzwa navanhu. Asi hapana munhu anogona kupingudza rurimi, rwakaipa uye haruna parwo uyezve rune chepfu.
 MuJudha chaiye muJudha ari muJudha mukati; saizvozvowo kudzingiswa kwechokwadi chinhu chomumwoyo chezvomweya kwete chokutevedza zvakanyorwa chete. Kurumbidzwa kwake kunobva kuna Mwari kwete kuvanhu. Ko muJudha chaanokunda vamwe nacho chii? Ko kudzingiswa kunobatsirei? Zvakatowanda uye nenzira dzakasiyana — siyana. Pokutanga, vaJudha vakachengeteswa zvirevo zvaMwari. Ko ngatitii vamwe vavo vakanga vasina kutendeka? Kusatendeka kwavo kunoshaisha basa kutendeka kwaMwari here?
 Asi kuna vavo vano mweya wokupanduka vasingateereri chokwadi vanotungamirirwa nouipi; chavo kutsamwirwa nokuitirwa zvehasha. Munhu wose anoita zvakaipa achapinda munhamo namatambudziko, kutanga nomuJudha tevere muGiriki. Asi munhu wose anoita zvakanaka achawana mbiri norukudzo norugare zvichitangirawo kumuJudha tevere muGiriki, nokuti Mwari haana rusaruro. Vose vakatadza vasina mutemo vachapararawo kunze kwomutemo. Uye vose vakatadzira Mwari vari pasi pomutemo vachatongwawo nomutemo.
 nokuti hatisi kurwisana navanhu asi nomweya ine ukuru ukuru, neino ushe nemweya inotonga pasi pose pano pane rima riripo iri uye tiri kurwisana nehondo nehondo dzomweya youipi iri mumatenga'mu. Naizvozvo torai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumira pazuva iroro rinenge rakaipa. Kana marwisa zvakaomarara zvazvo kudaro imi mucharamba makamira. Saizvozvo mirai makazvisunga zviuno zvenyu nechokwadi sebhande makapfeka demautare rapaditi rokururama. Mutsoka dzenyu pfekai shangu dzokuda kuparidza Shoko Rakanaka rorugare uyewo garai nguva dzose makabata nhoo yechitendero yamunogona kudzima nayo miseve yose yomoto yewakaipa.
 Mungwaru anochenjerera zvinhu uye anonzvenga zvakaipa asi benzi rinozviita suku nasai, harikendenge. Munhu anokurumidza kushatirwa zvaanoita ndezvoupenzi asi munhu anoona zvinhu nemazvo anoita mwoyo murefu. Vanhu vasina pfungwa dzakadzama chavo upenzi, vakangwara chavo indaza yoruzivo. Vaipi vanogwadamira vakanaka, ndizvo zvinoita vakaipa pamisuo mikuru yavarurami. Varombo havadiwi kunyange nomuvakidzani navo asi mupfumi ane shamwari zhinji. Munhu anoshora mumwe wake mutadzi, akakomborerwa zvake munhu anoitira varombo tsiye nyoro. Ko havakanganise here vanhu vanoronga kuita zvakaipa? Vanoronga kuita zvakanaka vanowana mwoyochena nokutendeseka.
 nokuti zvakanaka zvandinoda kuita handizviiti asi zvakaipa zvandisingadi kuita ndizvo zvandinoita. Zvino kana ndichiita zvandisingadi kuita, handisirini ndiri kuzviita asi kamwoyo kokuda kutadza kanogara mandiri kaya. Saka ndavakutozviona somutemo kuti kana ndichida kuita zvakanaka, chakaipa chinenge chiri pedyo pedyo. Zviripo ndezvokuti, ini mukatikati mangu chaimo, ndinofarira mutemo waMwari. Asi ndinoona kuti mumitezo yangu mune mumwewo mutemo unorwisana nomutemo uri mupfungwa dzangu uchindiita muranda womutemo wakamwoyo kaya kokuda kutadza kanogara mumitezo yangu. Zvino ini, panguwo pano, ndiani achandinunura kumuviri wangu uyu worufu. Ndinotenda Mwari kuti ndinonunurwa nokuna Jesu Kristu Tenzi wedu. Saka zviripo ndezvokuti ini pachangu ndinochengeta mutemo waMwari nepfungwa dzangu asi nenyama yangu ndinotevera mutemo wechitadzo.
 Akabva pagungano ravanhu akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vachiti, “Titsanangurirei muenzaniso wesawi romumunda.” Jesu akapindura achiti, “Anodyara mbeu yakanaka ndiye Mwanakomana womunhu. Munda wacho ndiyo nyika. Mbeu yakanaka ndivo vana voumambo. Sawi ndivo vana vomuipi. Muvengi akaridyara ndiDhiabhori. Kukohwa ndiko kuguma kwapasi. Vakohwi ndivo vatumwa. Sokuunganidzwa kunoitwa sawi richipiswa nomoto ndizvo zvichaitwawo pakuguma kwapasi. Mwanakomana womunhu achatuma vatumwa vake. Vachaunganidza vagobvisa muumambo hwake vose vanokonzera vanhu kutadza navose vanoita zvakaipa vachivakanda muvira romoto. Ikoko vanhu vachachema vachirumanidza mazino. Vakarurama vachapenya sezuva muumambo hwababa vavo. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe.
 Nhubu munhu akaipa anongofamba achikanganisa mashoko. Anochonya maziso anotondeka netsoka dzake achinongedzera nongedzera neminwe yake. Anoronga twaanoronga nomwoyo wakashata achiramba achingokonzera manyongori. Nhamo inoyerekana yamuwira, nenguva isipi anotyorwa-tyorwa zvisina karapiro. Pane zvinhu zvitanhatu zvisingadiwi naTenzi zvinotosvika zvinomwe zvinosemesa kwaari, zvinoti: Kuzvikudza, nokunyepa maoko anodeura ropa risina mhosva nomwoyo unoronga zvirongwa zvakaipa netsoka dzinomhanyirira kune zvakaipa chapupu chenhema chinotaura manyepo munhu anomutsa gakava pakati pehama.
 Vanhu pavakatanga kuwanda panyika, vakabereka vana vasikana. Vanakomana vaMwari vakaona kuti vasikana ivavo vakanga vakanaka, vakasarudza zvavo vakadzi vavakada, vakavaroora. Tenzi akati, “Handichabvumiri kuti mweya wangu uri mumunhu ugare maari nokusingaperi nokuti munhu ndowenyama, anofa. Saka haachagara panyika nguva inodarika zana ramakore rina makore makumi maviri.” Mazuva iwayo namazuva akatevera, panyika paiva nemazihofori chaiwo avanhu vakareba vakaberekwa navanakomana vaMwari pavakatorana navanasikana vavanhu. Vana vacho ndivo magamba aye makuru akarekare aiva nomukurumbira. Tenzi akaona kuti uipi hwevanhu hwakanga hwanyanya kuwanda panyika. Akaonawo kuti twavaiswerofunga zuva rose mumwoyo yavo, hwaiva huipi hwoga hwoga. Mwari akakungura kuti dai zvake asina kusika munhu pasi pano, zvikamushungurudza mumwoyo. Tenzi akati, “Ndichatsakatisa panyika vanhu vandakasika, ivo vanhu nemhuka nezvinokambaira nezvinozvova napasi, neshiri dzedenga. Ndino urombo kuti ndakasika vanhu.” Asi Tenzi akafadzwa zvake naNowa.
1 Timoti 6:2-10
 Avo vana vatenzi vanotenda havafaniri kusaremekedzwa pamusana pokuti vave hama nehama navo asi vavakutofanira kuvashandira zviri nani nokuti ivo vanobatsirwa nezvavanoshanda vatendi uye vadikanwi. Izvi unofanira kuzvidzidzisa vanhu nokuvakurudzira kuita. Kana munhu akadzidzisa zvimwewo asingawirirani namashoko ezvirokwazvo aTenzi wedu Jesu Kristu nechidzidziso chinowirirana nezvaMwari anozvitutumadza nokuzvikudza, munhu asina zvaanoziva. Munhu ana kamwoyo kokuda gakava nenharo dzezvamazwi anokonzera shanje nokusawirirana namakuhwa nokufungirana kusina kana namaturo ose nokukakavadzana pakati pavanhu vasina musoro vasina chokwadi vanofunga kuti kuitira Mwari basa chinhu chokuzvipfumisa nacho. Hongu kuitira Mwari kunopfumisa ndokunge munhu achigutsikana nezvaanazvo nokuti hatina kuuya nechinhu panyika uyewo hatikwanisi kubva nechinhu panyika asi kana tiine chokudya nechokupfeka; naizvozvo tinofanira kugutsikana. Asi avo vana kamwoyo kokuda kupfuma vanopinda muchiedzo nomuriva uye mukuda zvinhu zvisina maturo zvinotokuvadza zvinoisawo vazhinji mukupera basa nokuparadzwa nokuti kudisisa mari ndiwo mudzi wouipi hwose. Pamusana pokukara mari ikoko vamwe vakazosiya chitendero zvikazovarwadza mumwoyo zvikuru.
 Zvidzore rurumi rwako kuuipi, miromo yako irege kutaura nhema. Siyana nouipi uite zvakanaka, tsvaka rugare urutevere. Maziso aTENZI ari pavarurami, nzeve dzake dzakarerekera kuchichemo chavo. Uso hwaTENZI hwakanangana navakaipa kuti vakanganwike panyika. Kana vakarurama vakachemera rubatsiro TENZI anovanzwa achivanunura munhamo dzavo dzose. TENZI ari pedyo navakasuruvara anoponesa vanenge varasa mwoyo. Nhamo dzawakarurama dzakawanda asi TENZI anomuponesa madziri dzose. Anochengetedza mapfupa ake ose hapana kana rimwe rawo rinotyorwa. Uipi huchauraya vakaipa vanovenga varurami vachapihwa mhosva.
 Mugumo wowakaipa Nhai iwe gamba unozvikudzireiko nezvakaipa uchiti Mwari akanaka misi yose. Saka zuva rose uchitoronga zvako zvokuparadza. Rurimi rwako rwakaita sechisvo chinopinza, iwe murongi wounyengedzi. Unoda zvakaipa kupinda zvakanaka, unoda nhema kupinda kutaura zvakarurama. Dzepfunde Unoda mazwi anokuvadza iwe munyengedzi. Asi Mwari achakukoromora nokusingaperi achakubata agokubvuta mutendhe rako. Achakutipura kubva munyika yavapenyu. Dzepfunde Vakarurama vachizviona vachakatyamara vakamuseka vachiti, “Tarisai muone munhu asina kuda kupotera muna Mwari; asi akavimba nokuwanda kwoupfumi hwake akapotera muupfumi hwake.” Asi ini ndakaita somuorivhi munyoro mumba maMwari. Ndinovimba nemwoyochena waMwari narini narini. Ndichakutendai nokusingaperi nokuti makazviita. Ndicharumbidza zita renyu pana vakarurama nokuti rakanaka.
 Izvi ndozvakaipa pane zvose zvinoitika pasi pedenga zvokuti tinowirwa nenhamo imwecheteyo. Chimwezve ndechokuti mwoyo yavanhu izere nouipi. Kana vari vapenyu chete kupenga kurimo mumwoyo yavo, mushure macho vanoenda kuvafi. Asi munhu achiri mupenyu navamwe vose vapenyu anechitarisiro nokuti imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa. Chandinodariro ndechokuti vapenyu vanoziva kuti vachafa asi vakafa havana zvavanoziva. Mubayiro havachisina uye zvokuyeukwa hapachina. Rudo rwavo, noruvengo rwavo, uye shanje yavo zvakaparara. Havachisina kana mugove zvavo narini wose pazvinhu zvinoitwa pasi pedenga Enda udye chokudya chako nomufaro unwe waini yako nemwoyo unofara nokuti Mwari anofadzwa nezviito zvako. Gara wakapfeka zvichena. Gara wakazora mafuta mumusoro. Gara uchifara nomukadzi wepamwoyo pako mazuva ako ose ohupenyu hwako husina maturo aakakupa pasi pedenga nokuti ndiwo mugove wako paupenyu uye pabasa rako raunoshingaira kuita pasi pedenga. Chaunenge wagona kuita namaoko ako chiite nesimba rako rose nokuti kunzvimbo yavafi kwauri kuenda hakuna basa kana pfungwa kana ruzivo kana ungwaru. Chimwe chandakaona pasi pedenga ndechokuti shasha yokumhanya haisiyo inokunda vamwe vose. Gamba rokurwa harisiro rinokunda muhondo vangwaru havasivo vanowana chokudya vakachenjerawo havasivo vanowana upfumi, mhizha hadzisidzo dzinobudirira nguva yavanayo imwechete uye zvinowira mumwe zvinowira vose. Munhu haazivi nguva yake. Sezvinoitwa hove dzinobatwa mumumbure wakaipa uye seshiri dzinobatwa parugombe ndizvo zvine vanhu vanobatwa panguva yakaipa pazvinongoerekana zvavawira.
 Munhu wakaipa anototi sika sika zvake kudzingirira murombo. Itai kuti vabatwe nemisungo yavakazviteera nokuti munhu akaipa anotozvirovera dundundu havi dzake. Munhu ana makaro anoshonha nokuramba TENZI. Munhu wakaipa, nokuzvikudza kwake, muna zvose zvaanofunga haana basa naTENZI, anoti, “Hakuna Mwari.” Zvose zvaanoita zvinobudirira. Matongero enyu ari kure naye; ari kokoko kumusoro kure naye; kana zviri zvavavengi vake, anovasinamisira uso. Anozviti nechomumwoyo, handimbotsukunyuki, pazvizvarwa zvose hapana chinondiwana. Kurengerera rushambwa, nounyengedzi nokutyisidzira zvinogara zviri pamuromo pake. Rurimi rwake nderwomusikanzwa nouipi. Anohwandira mumamisha achiuraya vasina mhosva muchivande; maziso ake anonyatsotarisa vanenge vawiramo; anonyangira muchivande seshumba; anonyangira kuti abate varombo; anobata murombo kana amukwevera mumambure ake. Vanenge vawira, vanopwanyiwa vachitoti mvuchata pasi pamusana pesimba rake. Anofunga kuti Mwari anokanganwa; anozarira maziso ake; haambondioni. Simukai, TENZI Mwari simudzai ruoko rwenyu regai kukanganwa vatamburi.
 Mugwagwa mukuru wavarurami unotsaukana nouipi. Munhu anotarisa paanotsika anozvichengetedza upenyu. Kuzvikudza kunoteverwa nokuparadzwa uye kuviruka nehasha kunoteverwa nokukoromoka. Zviri nani kuva nomwoyo wokuzvirereka pamwechete navarombo pano kugoverana zvokupamba pamwechete navanozvikudza. Munhu anoteerera shoko anobudirira akakomborerwa anovimba naTenzi. Munhu akangwara anonzi munhu anoona zvinhu nemazvo, kutaura zvinotapira kunobatsira kukurudzira vamwe. Ungwaru itsime roupenyu kune anaho asi upenzi ishamhu kumapenzi. Pfungwa dzomungwaru dzinoita kuti muromo wake utaure zvinoungwaru uye zvinopamhidzira kumuromo wake chipo chokukurudzira vamwe. Mazwi akanaka akaita sezinga rouchi, anotapira parurimi uye anorapa munhu. Munhu anogona kuona zviito zvake sezvakanaka asi zvichizoguma zvamuendesa kurufu. Havi yomushandi ndiyo inomumanikidza kushanda nokuti nzara inomukweva. Dzenga rinomutsa muchokoto, zvarinotaura, moto chaiwo unopisa.
 Uipi homunhu noururami hwaMwari Chitadzo chinotaura revo kune wakaipa mukatikati memwoyo wake chichiti kwaari zvokutya Mwari hapana. Anozvibata kumeso mukufunga kwake achiti: uipi hwake haugone kuzivikanwa nokuvengwa. Mazwi anobva pamuromo pake akaipa uye ndookunyengedza. Haachaiti zvina ungwaru kana zvakanaka. Anoronga zvinhu zvakaipa ari paanorara wotobva wozvirongera gwara risina kunaka; haavengi uipi. Mwoyochena wenyu, TENZI, unosvika kumatenga; uye kutendeka kwenyu kunosvika kumakore. Ururami hwenyu hwakaita samakomo aMwari; kutonga kwenyu kwaita sehwenje hwakadzika munonunura munhu nemhuka, TENZI. Hakusi kukosha ikoko kwakaita mwoyochena wenyu Mwari! Vanhu vanopotera mumumvuri wamapapiro enyu. Vanodyiririra zvakawanda zvomumba menyu. Munovanwisa parwizi rwezvinofadza zvenyu. Imi ndimi mune chisipiti choupenyu muchiedza chenyu ndimo matinoona chiedza. Rambai muchiita mwoyochena wenyu kuna vanokuzivai uye muponese vano mwoyo yakarurama. Rutsoka rwavanozvikudza ngarurege kunditsika kana kutinhwa noruoko rwowakaipa. Ipapo vakaipa vachati rakata kurara, vachati umburu pasi, vasisagoni kusimuka.
 Mwanangu, teerera zvaunodzidziswa nababa vako. Usarambe zvaunorairwa naamai vako. Zvichava tsungare yokushongedza musoro wako nayo nechuma chokushongedza huro yako nacho. Mwanangu, vatadzi vakakunyengetedza kuita chinhu, usabvume. Kana vakati, “Uya tiende tindovandira vanhu tivauraye tindovhurumukira kuvarwisa vasina mhaka uye zvisina tsarukano sezvinoita nzvimbo yavafi tivamedze vari vapenyu vakangodaro sezvavakaita sezvinoita vanodzika muguva, tichawana zvose zvakakosha tigozadza dzimba dzedu nezvinhu zvokupamba, isa mugove wako kwatiri tive nechikwama chimwechete.” Mwanangu, rega kufamba munzira navo usarege tsoka yako ichienda munzira dzavo nokuti tsoka dzavo dzinomhanyira kuuipi uye vanokurumidza kudeura munhu ropa nokuti hazvina zvazvinobatsira kuteya urimbo shiri dzichiona. Vanhu ivava kutozvivandira ikoko kuti ivo vafe vanovandira kuparara kwoupenyu hwavo pachavo. Iwoyu ndiwo mugumo wavose vanowana zvinhu nenzira isina kunaka zvinoparadza upenyu hwomuridzi wazvo.
 “Hapana anokwirira mumwe kumatare mhosva chaiyo yechokwadi, hapana anonyatsotevedza zviri pamurao. Vanovimba netwaanotaura tusina maturo vachireva nhema zvavo. Vanodyara misikanzwa vachizokohwa zvakaipa. Vanochechenya mazai echiva, vanoruka dandadzi, anodya mazai azvo, anofa, rinenge rangochochonywa chete, munobva mabuda mvumbi. Madandadzi avo iwayo haangamboshandiswa sembatya, vanhu havangambopfeka zvinenge zvarukwa nawo. Twavanobata ivo tunhu twouipi chete, mabasa avanobata namaoko avo ndeoutsinye. Zvakaipa ndozvavanomhanyirira, vanofatira kudeura ropa ravanhu vasina mhosva. Uipi ndohwavanoswerofunga, migwagwa yavo mikuru vanosiya yangove matongo noumharadzi. Chinonzi rugare havachizive, maitiro avo haana ruenzaniso, mafambiro avo akakombama, anodimura nemariri rugare haamborunhuwa. “Heya ndokusaka ruenzaniso rwava kure kwazvo nesu kudai ururami uhu hatichambohunhuhwa. Patinotarisira kuwana mwenje tinongowana hero rima, pototi tiwanewo chiedza ndopatava kufamba muzarima. Tinotsvanzvadzira madziro samapofu tichiputaira savanhu vasina maziso. Tinodzadzarika masikati machena sokunge manheru, pakati pavanhu chaivo vakasvika, isu tinenge zvitunha. Tose tinobongomora sezvitsere, tinouura nokuura senjiva tichitarisirawo kuwana ruenzaniso asi ruenzaniso hapana tichitarisirawo ruponeso asi ruri kure kwazvo nesu. “Nokuti zvatakanganisa pamberi penyu zvawanda, kutadza kwedu tinokuziva, nokuti zvatakakutadzirai tinazvo mumwoyo, mhosva dzedu tinodziziva. Ndedzidzi dzinoti: kukukanganisirai, nokukurambai imi Tenzi, nokukupai gotsi kwatinoita tichifuratirai imi Mwari wedu nenyaya dzoutsinye kudyara mhodzi youmhandupandu, mumwoyo'mu, dziri nyaya dzemakuhwa. Ruenzaniso runonzi kure narwo, ururami hwava kumirira kure nesu nokuti chokwadi, pamatare, hapasisina, kutendeka kwapata. Hapana kwaunowana chokwadi anenge angoti regai ndisiyane nouipi ndiye anobva atopinda mupfumvu.” Tenzi akazviona uye hazvina kumufadza kuti hapana ruenzaniso.
 uye kana rudzi rwavanhu ivavo rune zvandinenge ndataura zvacho rukapinduka pakuipa kwarwo neniwo ndinobva ndaregawo kuita zvakaipa zvandinenge ndambofunga kuti ndiite kwarwuri. Uyewo nguva yose zvayo yandinenge ndatemera rumwe rudzi rwavanhu kana imwe nyika kuti ndichaivaka ndigoisima, kana rudzi rwacho irworwo rukaita zvakaipa ruchirega kuteerera izwi rangu, ini ndinobva ndasandukawo ndorega kuruitira zvakanaka zvandakanga ndaronga kuruitira. Saka zvino wochitaurira vanhu vokwaJudha navagari veJerusaremu kuti, ‘Zvanzi naTenzi, ndiri kukurongerai nhamo, ndiri kukurukirai mazano okukutsvatai. Pindukai, munhu wose akande pasi nzira dzake dzakaipa mugadziridze mafambiro enyu namaitiro enyu.’ “Asi ivo vanoti, ‘Hazvina maturo izvi. Tinotevera zvirongwa zvedu mumwe nomumwe achitevera zvake zvomusoro wake zvakaipa.’ ” Naizvozvo, zvanzi naTenzi: “Imbobvunzaiwo pakati pevechirudzi kuti ndiani akambonzwawo zvakadai sezvizvi? Mhandara iyi, Isiraeri yakaita zvinhu zvakaipisisa kwazvo. “Chando cheRebhanoni chinombopera here pazvikangararwe zveGomo reSirioni? Mvura yomugomo inombopwa here kuerera, tukova tune mvura inotonhorera? “Asi vanhu vangu vandikanganwa. Vanopisira rusenzi kuna vamwari vasirivo vanogumburwa munzira dzawo, nzira dzakare vakapinda mutwunzirawo zvatwo kwete mumigwagwa mikuru vachiita kuti nyika yavo ive chiseko chaicho chinhu chinoridzirwa zvacho tsamwa narini wose. “Munhu wose anopfuura nemairi anokatyamadzwa nazvo achidzungudza musoro wake. “Sezvinoita mhepo yokumabvazuva, ndichavamwayanisa kuvavengi. Ndichavapa gotsi ndisingambovatarisa pazuva ravo renhamo.” Vanhu ndopavakati, “Uyai tironge mazano okutsvata nawo Jeremiya nokuti kuvapristi mutemo hauzofa wakarova kunyange zano kuna vangwaru harimboperi, kana irowo shoko rinobva kumuporofita. Uyai timutape mukanwa, tirege kumboteerera zvedu zvaanotaura. “Imi Tenzi, Teererai munzwe chichemo changu. Ko zvakaipa zvingave ndizvo here zvokutsiva nazvo zvakanaka? Asi vakandicherera hunza kuti vandiurayire imomo. Rangarirai kumira kwendakaita pamberi penyu ndichivareverera kuti mudzore hasha dzenyu kwavari.
 Ururami hwavakatendeka hunovanunura asi vanyengedzi vanobatwa noruchiva rwavo. Kana wakaipa ofa chitarisiro chake chinobva chati mbombombo uye zvinotarisirwa nomuipi zvinoti mwarara. Mururami anonunurwa kunhamo asi muipi anotopindana nayo nhamo. Asiri munamati anogona kuparadza mumwe wake nomuromo wake asi varurami vanoponeswa noruzivo. Zvikanakira vakarurama guta rinopembera nokufara. Kana vakaipa vakaparara kunofarwa zvokupembera kwazvo. Guta rinorumbidzwa pamusana pechikomborero chavakarurama asi rinoparadzwa nomuromo wavakaipa. Munhu anoninipisa mumwe wake, kushaya pfungwa munhu anonzwisisa anonyarara. Munhu anofamba achiita makuhwa anoburitsa pachena zvinhu zvakavandika asi munhu anemwoyo kwawo anochengetedza zvinhu zvakavandika. Kana pasina anotungamira, rudzi runoputsikira pasi kukurira kunobva mukunyatsoronga. Anomiririra chikwereti chomunhu waasingazivi zvichamutemesa musoro. Munhu anovenga kumiririra chikwereti chomumwe akagarika. Mukadzi ano hunhu anoremekedzwa asi murume anoita zvechisimba chaanowana upfumi. Murume ane mwoyo wakanaka zvinhu zvinomufambira zvakanaka asi murume ane mwoyo wohutsinye anozvikuvadza. Munhu wakaipa anowana mubayiro wounyengedzi asi anodyara ururami anowana mubayiro kwawo. Anosimbirira muururami anorarama asi anoronda uipi anofa. Vanhu vane mwoyo wakaipa Tenzi haavadi asi vasina mhosva anofadzwa navo. Iva nechokwadi chokuti munhu akaipa anorangwa chete asi vana vavakarurama vanonunurwa. Zvakangoita ringi rendarama riri mumhuno yenguruve ndozvakaita mukadzi ano runako asi asinganzwisisi. Chido chomururami chinopera nomune zvakanaka asi chitarisiro chavakaita kuitirwa hasha. Mumwe ndimupanogombe asi achitobva atopfumisisa mumwe ndikanyimiramundiro asi achiva murombo. Munhu anopa achapfuma anogutsa vamwe achagutswawo. Vanhu vanoti munhu anoomerera nembesanwa dai awana chinomuwana asi anodzitengesa ane chikomborero. Munhu anotsvaka zvakanaka anotsvaka kudiwa asi uipi hunouya kune anoutsvaka.
 Erifasi muTemani ndopaakazopindurawo achiti: “Iye munhu woungwaru anofanira kuita mwando here pakupindura achitozviti shutu kudaro nemwando wokumabvazuva, achizvidzivirira namazwi asina chimuko namashoko asina maturo? Zvokuremekedza Mwari wavakuti ngazvipere uchitotadzisa anoda zvake kunamata Mwari. Uipi hwako ndihwo hunokutunza kuva napamuromo, uye unosarudza matauriro ohujarijari. Muromo wako ndiwo unokubatisa nemhosva kwete ini. Muromo wako ndiwo unopupura kuti une mhosva. “Ndiwe wokutanga kuberekwa here iwe? Wakatangira makomo kuzvarwa here? Zvinoreva here kuti wakamboteerera padare raMwari, iwe? Saka unoti ungwaru ndohwako iwe chete nhai? Chaunoziva iwe chatisingazivi chii? Chaunonzwisisa chatisinganzwisisi isu chii? Vachena musoro navakwegura varimo mukati medu, vakuru kuna baba vako. Iwo mazwi aMwari okunyaradza aita madiki kwauri nhai, kanawo mazwi akapfava ari kutaurwa kwauri? “Unoitirei manyawi kudai uchitoringaringa maziso kudaro, zvaunotovirukira Mwari nehasha kudaro uchingobvotomoka zvako kutaura? Munhu angave mutsvene sei chaizvo? Munhuwo zvake akaberekwa nomunhukadzi angave pachokwadi sei? Inga Mwari haavimbi navatsvene vake wani, Kunyange matenga chaiwo haana kuchena kwaari. Ko kutozotiwo zvake munhu akanyangara ane tsika dzakaora anonwa uipi semvura. Chiteerera unzwe ndikudziidzise ndichakutaurira zvandakaona, zvakataurwa navangwaru, zvisina kuvanzwa namadzibaba vavo, ivo voga vakapiwa nyika vakanga vasina mutorwa pakati pavo. Upenyu hwavakaipa inhamo yoga isingaperi, munhu anobata vamwe noutsinye makore aakapiwa ndookutoverenga. Inogara iri mhere chete munzeve dzake, akati agarike, yauya mharadzi. Haangambofunga kuti murima achamubuda. Asi chaanoziva ndechokuti chake chaatemerwa kuuraiwa nebakatwa ichiva nyama yamagora. Anoziva kuti zuva rokuparadzwa kwake rosvika. Kuzvidya mwoyo nokushungurudzika kunomurwisa, samambo aronganisa hondo kuti achirwa. Nokuti akasimudza ruoko rwake kurwisa Mwari akaita chivindi chokusaremekedza Samasimba. Anomhanya kwazvo akateya musoro nenhoo inorema, nokuti akafuta kumeso aine hutsakutsa dzezvidya. Nokuti agere mumaguta ava matongo, mudzimba dzisingafaniri kugarwa nomunhu mudzimba dzavakuda kuva matongo. Haambopfuma, uye upfumi hwake haugari kunyange mumvuri wake chaiwo hauzova panyika. Haazokwanisa kupunyuka rima, marimi omoto achaomesa mabukira ake maruva ake achapupurutswa nemhepo. Ngaarege kuvimba nezvisina maturo achizvinyengedza. Nokuti zvisina maturo ndizvo zvichava mubayiro wake. Achauna nguva yake isati yasvika, mapazi ake asati ambopfumvudza. Achazunzika magirepisi ake asina kuibva somugirepisi, achidonhedza maruva ake somuorivhi. “Gungano ravakan'ora harina michero yarinobereka. Misha yevepfumbamuromo ichaparadzwa nomoto. Mhodzi yavanodyara mumwoyo yavo unhunzvatunzva, vanotakura uipi, unyengedzi ndiye mwana wacho wavanobereka.”